A Joe Biden madaxweyne: Maxay uga dhigan tahay Kenya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii A Joe Biden madaxweyne: Maxay uga dhigan tahay Kenya
NationNov 6, 2020 Akhriso asalka
Maxaad u baahan tahay inaad ogaato:
Musharaxa Madaxweynaha Dimuqraadiga Joe Biden wuxuu ka hadlayaa Xarunta Chase ee Wilmington, Delaware, Nofeembar 4, 2020.
Muxuu madaxweynenimada Joe Biden keeni lahaa Afrika? Malaha waxba, ama malaha xoogaa “xushmad,” sida ay qabaan falanqeeyayaasha Machadka Daraasaadka Amniga ee Koonfur Afrika.
Dooddan, dabcan, oo ku saabsan doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka, waa la aamusay iyadoo la eegayo nooca heesaha codadka toddobaadkan. Dalkaas, qofku wuu heli karaa codad badan (oo caan ah) laakiin wali wuu lumin karaa madaxweynenimada sidii ku dhacday Hillary Clinton iyo Al Gore, oo labaduba ah murashaxiin Dimuqraadi ah.
Ka hor doorashooyinka, qiimeynta Trump ee Afrika waxay ahayd kalabar wixii Obama ku raaxeystay qaaradda. Daraasad lagu sameeyay ilaa 4200 oo dhalinyaro ah oo ku kala baahsan 12 dal oo Afrikaan ah, oo ay ku jirto Kenya, ayaa usbuucan u soo qaatay Mareykanka inuu weli yahay dal saameyn ku leh qaaradda in kasta oo Shiinaha uu xifaaltan ka dhexeeyo.
Waxaa wakiishay Ichikowitz Family Foundation (IFF) oo ay fulisay cilmi baarista PSB (oo xiriir la leh WPP Group), baaritaanka waxaa lagu wareystay dhalinyaro ka kala socota Kenya, Congo Brazzaville, Ethiopia, Gabon, Ghana, Malawi, Mali, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa, Togo, Zambia iyo Zimbabwe.
Biden, oo ah Madaxweyne-ku-xigeenkiisii ​​hore ee sannadihii Obama, guushiisa soo socota, isaga oo u malaynaya inuu sii wado dhabbaha, wuxuu sixi karaa khaladaad badan ama gefafyo lagu arkay sannadihii Donald Trump.
Waxaa jiri kara Shir Madaxeedka Afrika ee ka dhacaya Washington, tusaale ahaan, markii ugu dambeysay ee la arkay 2014 xilligii maamulkii Barack Obama.
“Ixtiraamka Afrika waxay ahaan laheyd, tusaale ahaan, in laga qaado shuruudda ah in Suudaan aqoonsato Israel si Suudaan looga saaro liiska Dowladaha Taageera Argagixisada,” ISS ayaa sidaa ku tiri bayaan ay soo saartay bishii hore.
Waxyaabaha kale ee diirada lasaarayo waxay noqon doonaan wadahadalada heshiisyada ganacsiga xorta ah ee xorta ah ee qaarada Afrika, labada dhinacba ama gobol ahaan. Kuwani waxay aakhirka beddeli doonaan Sharciga Kobaca iyo Fursadda Afrika ee aan dib-u-soo-noqoshada lahayn (AGOA) kaas oo u oggolaanaya dhoofinta dalal Afrikaan ah oo xaq u leh inay galaan Mareykanka, waajibaadka iyo kootada-la’aanta
Biden iyo Trump labaduba wax yar ayey ka hadleen Afrika, iskaba daa Kenya. Laakiin madaxweynenimadiisu waxay bartilmaameedsan kartaa inay saxdo wixii Trump sameeyay, oo ay ka mid tahay ka bixitaanka hay’adaha muhiimka ah ee dhinacyada badan.
Talaadadii toddobaadkan, Mareykanku wuxuu si rasmi ah uga baxay heshiiskii Paris, sanad kadib markii Trump bilaabay howsha inuu ka baxo heshiis caalami ah oo la gaaray sanadkii 2015 si loogu oggolaado yareynta qiiqa qiiqa leh ee qiiqa loo sii daayo.
Iyadoo la adeegsanayo aaladaha daahfurnaanta ee lagu heshiiyey, heshiiskii udub dhexaadka u ahaa Paris ayaa ujeedkiisu ahaa in la xoojiyo jawaabta caalamiga ah ee halista isbedelka cimilada iyadoo la ilaalinayo heerkulka adduunka oo ka sii hooseeya 2 darajo Celsius Waxay sidoo kale ujeedkeedu ahaa in la xoojiyo awoodda waddammada ee wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada iyadoo lagu dhiirrigelinayo taageerada maaliyadeed ee tikniyoolajiyadda cusub ee cagaaran iyo taageeridda dalalka soo koraya.
Trump wuu ka noqday taas, isagoo u oggolaaday mid ka mid ah kuwa adduunka ugu weyn ee isticmaala shidaalka iyo wasakhda inay ka maqnaato xeerarka ay gaareen adduunka.
Ololaha Biden wuxuu soo jeediyay inuu kala noqon doono bixitaanka. Boggiisa ayaa sheegaya inuu qirayo caqabadda ugu weyn ee soo food saartay Mareykanka iyo Adduunkaba waa isbeddelka cimilada, oo ah wax Trump u diiday been abuur.
“Taasi waa sababta uu (Biden) u soo bandhigayo qorshe geesinimo leh – Kacaan Tamarta Nadiif ah – si wax looga qabto halistaan ​​halista ah isla markaana adduunka loogu hoggaamiyo wax ka qabashada xaaladaha degdegga ah ee cimilada,” ayuu Biden ballan qaaday.
“Madaxweyne ahaan, Biden wuxuu adduunka u horseedi doonaa inuu wax ka qabto xaaladaha degdegga ah ee cimilada oo uu ku hoggaamiyo awoodda tusaale ahaan, isagoo hubinaya in Mareykanku uu ku guuleysto 100 boqolkiiba dhaqaalaha tamarta nadiifka ah iyo qiiqa saafiga ah ee aan nadiifka ahayn ugu dambeyn 2050.”
Toddobaadkan, markii bixitaanku noqday mid rasmi ah, sanad kadib markii madaxweyne Trump uu xareeyay aaladaha bixitaanka., Dadka u dhaqdhaqaaqa waxay sheegeen in aysan muhiim ahayn cidda guuleysata, laakiin in loolanku ku qasbo siyaasiyiinta inay beddelaan aragtidooda ku saabsan isbeddelka cimilada.
“Ka bixitaanka Mareykanku waxay saameyn weyn ku leedahay adduunka intiisa kale marka la eego wax ka qabashada dhibaatada cimilada,” ayuu yiri Agaasimaha Fulinta ee Boeve, 350.org, oo ah urur aan faa’iido doon ahayn oo Mareykan ah, ayaa ku yiri hadal uu soo saaray.
“Mareykanka oo ka tagaya heshiiskii cimilada ee Paris wuxuu muujinayaa waxa ku jira doorashadan. Waxa aan hadda u baahanahay ayaa ah dhammaan gacmaha oo la isula taagay hoggaanka cimilada adduunka, ”
Ururku wuxuu caddeeyay inuusan taageerin labada murashax midkood, laakiin wuxuu ka digay haddii heshiiska cimilada ee Paris uu noqdo mid joogto ah, waxay wiiqaysaa go’aanka dalalka kale ee ah inay iyagu gooyaan adag.
“In kasta oo dowladda federaalka Mareykanka ay si rasmi ah uga baxday heshiiskii Paris, haddana waxaa jira malaayiin Mareykan ah oo diiddan dib u gurashadaas, u heellan caddaaladda cimilada, waxayna dalbanayaan in Mareykanku guud ahaan – oo ay ku jiraan magaalooyin, gobollo iyo bangiyo – ay ilaaliyaan yoolalka Paris oo aad uga gudubto, Boeve ayaa ku dooday bayaan.
Kenya, madaxweynenimada Biden waxaa laga yaabaa in laga filayo inay raacdo heshiisyadii la gaadhay sannadihii ugu horreeyay ee Trump.
“Madaxweyne Trump, uma muuqdo inuu aad u daneynayo Afrika sida kuwii isaga ka horreeyay ee barnaamijyada saxiixa ku lahaa Afrika. Si kastaba ha noqotee, wuxuu fuliyay qorshayaashoodii sida PEPFAR ee xilligii madaxweyne George W Bush iyo AGOA ee madaxweyne Clinton taasoo aasaas ka dhigtay heshiiska Kenya iyo Mareykanka ee la xiriira ganacsiga ganacsiga, ”Ms Lydia Kimani, Liaison for the Society of Crib Agribusiness Advisors oo ku sugan Nairobi ayaa u sheegay Nation.
Waxay ku doodeysay, intii Trump uu talada hayay, Nairobi waa inay filaysaa in ka yar gargaarka, laakiin in laga wada hadlo ganacsiga iyo maalgashiga. Labada musharax midkood ayaa laga yaabaa inuu sii wado barnaamijyada kale ee amniga iyo maamulka. Laakiin dhibaatooyinka gudaha ee Mareykanka ee Covid-19 waxay ka dhigan tahay in kaalmadu ay yaraan karto mustaqbalka dhow.
Kenya way danayn doontaa maxaa yeelay waxay bilowday inay kala xaajooto heshiis ganacsi Washington iyada oo ololihii halkaa ka sii kululaaday. Marka la eego mudnaanta la dejiyey markii Mareykanku uu kala xaajoonayey saaxiibada kale heshiis ganacsi, Kenya waa inay rajeyneysaa in faa iidooyinka xagga amniga lagu daro FTA, Ms Kimani ayaa u sheegtay Nation.
Laakiin waxaa jiri kara qabsasho.
“Waxay muhiim u tahay in marka hore la fahmo saameynta uu aafada ku yeeshay goobaha ganacsiga ee dalka,” ayay tiri iyada oo tixraaceysa dhaqaalaha inta badan aan rasmiga aheyn ee Kenya, ee ku saleysan adeegga ee ay la leeyihiin shirkadaha rasmiga ah ee Mareykanka.
“Sidaa darteed, su’aasha ayaa isweydiinaysa, marka la fiiriyo kala duwanaanshahan, ma shirkadaha Kenya ayaa diyaar u ah ganacsiga xorta ah ee qaybaha oo dhan, qaar aad xasaasi u ah sida beeraha taageera malaayiinta reer Kenya iyo noloshooda? Ma leeyihiin awood ay kula tartamaan ganacsiyada Mareykanka? ”
Mashaariicda muhiimka ah
Bishii Ogosto 2018, Madaxweynayaasha Trump iyo Uhuru Kenyatta, Aqalka Cad, waxay ka dejiyeen qaab-wada-hadal istiraatiijiyadeed oo laba geesood ah, iyagoo sare u qaaday xiriirkooda labada dhinac ‘istiraatiijiyad iskaashi’. Tan macnaheedu waxa weeye in diirada la saaro laba dhinac, oo ku dhisan “qiyam la wadaago, wax wada qabsi, iyo aragti midaysan oo ku saabsan bulshooyinka xorta ah, furan, iyo kuwa aaminka ah,” dirista la tilmaamay waqtigaas.
Tii ka horeysay ee Trump ayaa bilaabay ama sii waday barnaamijyada gargaarka sida PEPFAR (Jawaabta Degdega ah ee Madaxweynaha ee AIDs Relief oo uu bilaabay George W Bush), oo taageera bukaanada HIV / AIDs ee Afrika, iyo lacag u soo shubaya waxbarashada iyo gargaarka bini’aadanimo ee Afrika.
Obama wuxuu sidoo kale bilaabay Hindisaha Hogaaminta Hogaaminta Dhalinyarada Afrika, ee loogu tala galay in lagu beero qiyamka dowladnimo ee dhalinyarada.
Trump wuxuu aad u daneynayay xiriirka ganacsi, halkii uu ka bilaabay Prosper Africa, oo ah qorshe loogu talagalay in looga hortago Shiinaha loona sameeyo wadiiqooyin shirkadaha Mareykanka. Waxay ka timid Ka-faa’iideysiga Wanaagsan ee Maalgashiga ee horseedaya Sharciga Horumarinta ee 2018 (BUILD Act), oo beddelay shirkaddii hore ee Maalgashiga Dibedda ee Dibadda oo loo beddelay Shirkadda Horumarinta Mareykanka ee Horumarinta, oo ah $ 60 bilyan oo doollar.
George Mucee, oo ah Hogaamiyaha Tababarka ee Fragomen-Kenya, oo ah shirkad la talinta socdaalka, ayaa ku doodeysa inay sidoo kale muujisay inuu taageeri doono xulafada ka caawin kara siyaasadiisa.
“Trump aad ayuu ugu culusyahay amniga qaranka qofkasta oo gacan ka geysta hormarinta nabadgalyada wadankiisa waa saaxiib. Kenya waxay si aad ah uga faa’iideysatay maalgalinta amniga si ay uga caawiso la dagaalanka argagixisada.”
Sanadkii la soo dhaafay, Mareykanka iyo Kenya waxay kala saxiixdeen Qorshe Hawleedka Wadajirka ah ee Wadajirka ah ee Dowlad Gobaleedka Amniga oo loogu talagalay “in lagu xoojiyo iskaashiga labada dhinac ee amniga rayidka, maamulka, iyo dadaallada la dagaallanka musuqmaasuqa,” sida lagu sheegay waaxda arrimaha dibedda ee loo diray bishii May 2019
Taasi waxay ka dhigan tahay in Mareykanku uu sii wadayo taageerida barnaamijyada martigelinta qaxootiga ee Kenya iyo sidoo kale caafimaadka, waxbarashada iyo taageerada amniga.
Previous articleRaysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, oo magacaabis sameeyey, xilli dalkaasi galay guluf colaadeed
Next articleDadka Azerbaijan oo u dabaal degay ‘qabsashada’ magaalada Shusha
K/xigeenka Agaasimaha Guud ee Hey'adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Md Xasan Cabdulqaadir Maxamed ayaa Xarigga ka jaray Xafiiska Bixinta Baasaboorka ee Degmada Waajid ee Gobolka...
Kumanaan qof oo ka qaxay dagaalka ka socda Tigray